के कुलमान घिसिङ चुनावमा बिजयि हुन्छन त ? – Dainiki Online
के कुलमान घिसिङ चुनावमा बिजयि हुन्छन त ?
02/06/2021 02/06/2021 adminLeaveaComment on के कुलमान घिसिङ चुनावमा बिजयि हुन्छन त ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनाव लड्न आग्रह गरिएको छ । गायक तथा अभिनेता रोबिन तामाङले घिसिङलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । गायक तामाङले सोमबार फेसबुकमार्फत घिसिङलाई आउँदै गरेको चुनावमा उम्मेद्वारी दिन आग्रह गरेका छन् ।गायक रोबिन लेख्छन्, “कुलमान दाइ (कुलमान घिसिङ) चुनाव आँउदैछ । दाइ म भित्रैदेखि तपाईंलाई उमेदवारी दिन आग्रह गर्दछु, तपाईंले पक्कै पनि जनताको साथ पाउनुहुनेछ । म नेपालीले शहिरहेको पीडा देखेर थकित भैसकेको छु, हाम्रो देश धेरै राम्रो हुन सक्छ ।”****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला*****
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही लोकप्रियता कमाउने खालका विषय पनि समेटेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो स्नातक उत्तीर्ण युवाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने विषय ।देशमा शैक्षिक बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला युवा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका लागि भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा एकदमै सकारात्मक सराहनीय र स्वागतयोग्य छ ।
सरकारले अघिल्ला वर्षमा पनि यसबारे घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । सरकारले ल्याएको यो नीति लागू हुन सक्यो र नागरिकहरू पनि अनुशासित, मिहिनेती,लगनशील अनि धैर्यवान् हुने हो भने आगामी केही वर्षमा देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्यामा कम गर्न यस्तो नीति लाभदायक हुनसक्छ ।युवा उद्यमीको सङ्ख्या ज्यादा र विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता कम हुने निश्चित छ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता पाउने हो भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका समग्र युवाहरूले कुनै कार्यालयमा काम गर्ने,घुम्ने कुर्सीमै बसेर जागिर खाने भन्ने मानसिकता पनि हटाउन जरुरी छ ।
हाम्रो देशमा यति धेरै अवसर छन्,यसलाई सही सदुपयोग गर्न अझैसम्म पनि युवाहरूको दिमागमा छिरेको छैन । स्वरोजगार हुन कतिपय कामका क्षेत्रमा एकदमै कम लगानीबाट सुरु गरेर पनि करोडसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ । त्यस्ता कामका लागि मिहिनेत अनि समय दिई विचलित निरन्तरता दियो भने प्रगति गर्न धेरै समय लाग्दैन ।यदि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेजस्तै बिना झन्झट शैक्षिक बेरोजगारहरू युवा वर्गलाई सहुलियत ऋण दिने हो भने नेपालमा त्यो रकमले धेरै कार्य गर्न सकिन्छ । यता बैङ्कहरूले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सीधै ऋण लगानी गर्ने कुरा आउँदैन ।
उनीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथमा ऋण लगानी गर्ने र त्यो कामबाट ऋण र ब्याज फिर्ता आउने सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । २५ लाख लगानी गरेर स्वरोजगार बन्नका लागि मैले निम्न केही बुँदा सुझाएको छु ।
–२५ लाख रूपैयाँले नेपालमा कृषिजन्य व्यवसाय गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा हरेक परिवारमा केही न केही मात्रामा अवश्य पनि खेतीयोग्य जमिन छ ।
उक्त जमिनमा आधुनिक तरिकाले खेतीपाती,तरकारी लगायत नगदेबाली लगाउन सकिन्छ । उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मल,बीउ र आधुनिक खनजोत गर्नका लागि ट्याक्टर लगायतका उपकरण किन्नको सो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
–सो रकम पशुपालनका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । नेपाल माछा मासुमा अझै पनि पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । मासुका लागि मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भारतमा जाने गरेको छ । स्वेदेशमै आधुनिक प्रविधि अपनाएर सानो लगानीमा भए पनि गाई,भैँसी,बाख्रा,कुखुरा लगायतका पशुपालन तथा माछा पालन गर्न सकिन्छ ।
–नेपालमा गर्न सकिने अर्को व्यवसाय तयारी पोशाक उत्पादन पनि हो । २५ लाख रूपैयाँबाट १० देखि १५ वटासम्म सिलाई मेसिन खरिद गर्न सकिन्छ । तयारी कपडा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ सहजै पाइने भएकाले केही कामदार राखेर सानो व्यवसाय गर्न सकिन्छ र यसको भविष्य धेरै राम्रो रहेको छ ।
–साबुन बनाउने कारखाना,धुप बनाउने कारखाना,सस्तो चप्पल बनाउने,ब्याग कारखाना,कपी छपाई,सेनिटरी प्याड उत्पादन जस्ता सानो लगानीमा यस्ता धेरैवटा व्यवसाय गर्न सकिन्छ जहाँ ४० देखी ५० जना कामदारलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ ।
–२५ लाख रुपियाँमा इम्ब्रोडरी गर्ने,प्रिन्ट गर्ने मेसिन सञ्चालन गरेर हरेक महिना खर्च कटाएर १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म सजिलै आम्दानी गर्न सकिन्छ
।–त्यस्तै एलईडी बल्ब बनाउने,पनिर उद्योग,मसला उद्योग,प्याकिङ,बलपेन मेसिन,डलहरू बनाउने,क्याफे,ट्राभल एजेन्सी,वेभ ग्राफिक डिजाइन,विभिन्न तालिम केन्द्रहरू,ट्युसन सेन्टर,होमस्टे लगायतका धेरैभन्दा धेरै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ
Tagged कुलमान घिसिङ
प्रदेशहरूमा कतै बजेट छलफल सुरु, कतै अन्योल
सुटकेशमा पैसा बोकेर नेकपा सांसद खरिद हुन थालेको यी नेताको खुलासा
ऋषि जी चुप लाग्नुस् भन्ने नारायणकाजीले ऋषिलाइ फेरी अन्तर्वार्तामै हप्काए, ऋषिले पनि पारे यो पल्ट र्याक र्याक (भिडियोसहित)